Unofanirwa Kushambadzira kune Akakosha mazwi Pasina Yekutsvaga Vhoriyamu? | Martech Zone
Muvhuro, Zvita 10, 2012 Muvhuro, Zvita 10, 2012 Douglas Karr
Mazwi akakosha ndiwo mutauro wakajairika pakati petarisiro yako, webhusaiti yako uye mitsva yekutsvaga injini yaunowanikwa mairi. Dzakakosha nekuda kwekukosha kwadzo uye kugona kushandura. Kune saiti senge Martech, yakafara mazwi akakosha anogona kuve akakosha kutyaira kushanya. Asi izvo zvinongoitika nekuti kushanya uye kufarirwa kwese ndizvo chinangwa cheichi blog.
Kune rako bhizinesi, kushanya hakufanirwe kunge kuri kwekutanga chiratidzo chiratidzo chesaiti yako, inofanira kunge iri yako kutendeuka. Nguva zhinji, mazwi akakosha anoshandura akasiyana neaya anotyaira traffic. Kuongororwa nemakambani mazhinji ekugadzirisa vakaona kuti, nepo hukuru hukuru pane yakakwira yekutsvaga vhoriyamu, izwi rimwe chete rinogona kutyaira zviuru zvekushanya… a muswe murefu chirevo chemashoko matatu kusvika mana anogona kutyaira kwakawanda kutendeuka.
Ko zvakadii nemazwi akakosha pasina vhoriyamu yekutsvaga? Tisati tapindura izvozvo, tinofanira kutaura izvozvo hapana yekutsvaga vhoriyamu sezvakataurwa neGoogle. Anenge mazwi ese akakosha kana mutsara ane imwe mhando yehoriyamu… kunyangwe zvichingova zvishoma zvekutsvaga mwedzi wega wega.
Mumwe wevatengi vedu ndiRight On Interactive - yekushambadzira michina kambani inoshanda nemakambani kwete kungotora zvinotungamira asi kusimudzira kukosha kweumwe mutengi. Pavaive vachitsanangura bhizinesi ravo kumatarisiro, chirevo mutengi lifecycle kushambadzira akatsanangura zviri nyore kupfuura chero ipi zvayo muindasitiri. Kunyange yaive chirevo chakaringana chebhizimusi ravo, kushambadzira kwevatengi vehupenyu hwaive vasina vhoriyamu yekutsvaga patakatanga kushanda navo gore rapfuura.
Isu hatina kuraira Right On kumisa kushambadzira kune iro rakakosha izwi, zvakadaro. Chakanga chiri chirevo chinomanikidza chakaringana kuti chaienderana nechiratidzo chavo uye raigona kuve izwi raive rakagamuchirwa zvakanyanya mune ramangwana. Ndizvo chaizvo zvakaitika. Kwevatengi lifecycle kushambadzira iri izwi riri kukura mune zvese mukurumbira uye muhuwandu hwekutsvaga. Ikozvino pane zvinopfuura makumi matatu ekutsvaga pamwedzi kwetemu iyoyo. Uye fungidzira ndiani anozvikwanira?
Usatapure hurukuro iri pawebhusaiti yako kune chete akakosha mazwi uye zvirevo zvine yakanyanya kutsvaga vhoriyamu! Shandisa chero mutsara unoreva Zvakakodzera kune rako bhizinesi, kunyangwe kana ichityaira kushanya kumwe chete! Iwo mukana wekuti kiyi kiyi kana chirevo chinotyaira shanduko inowedzera nekukosha kwayo… kwete iro vhoriyamu. Zvakanakisisa pane zvese, kana huwandu hwekutsvaga hwakaderera… hausi kuzokwikwidza zvakanyanya kune iyo traffic!
Tags: keyword vhoriyamumazwi akadzamachaipokurudyi pane kudyidzana
Dec 19, 2012 pa 6: 19 AM
Kune akawanda akasiyana marudzi emazano nezve keywords. Uye nharo, zvakare. Kwandiri chikonzero chemashoko-muswe marefu ari kutyaira shanduko dzakawanda imhaka yekuti paunonyora iyo chaiyo yekutsvaga, unenge watoita sarudzo yekutenga.